NISSAN ICON AUTO SHOWROOM ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို မန္တလေးမြို့၌ကျင်းပခဲ့
NISSAN ICON AUTO SHOWROOM ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် အမှတ် (၅၉၀/၁) ၇၄ လမ်း၊ မြို့မဥယျာဉ်ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် မန္တလေးမြို့မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအခမ်းအနားကို မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ မန္တလေးမြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာရဲလွင်၊ Century Mandalay နှင့် ICON AUTO Co.,Ltd. ရဲ့ Chairman ဒေါက်တာကိုကိုအောင်နှင့် Managing Director ဒေါက်တာမိမိဇင်၊ Tan Chong Motor Myanmar ရဲ့ Director Mr. Thambirajah ၊ ICON AUTO Co.,Ltd. ရဲ့ Director တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်စံပယ်လွင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကို ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
Nissan Icon Auto ဟာ Nissan ရဲ့အထက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသော International Standard Nissan Retail Concept 3S Showroom ဖြစ်တဲ့အပြင် မန္တလေးမြို့နဲ့ အထက်မြန်မာနိုင်ငံကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Nissan Experience နဲ့ Service တွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Nissan Icon Auto Showroom ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ကနေ ၁၀ ရက်နေ့အထိ အထူး Special Promotion အဖြစ် Check in Bonus ၁ သိန်း၊ ၂ သိန်း၊ ၃ သိန်း Cash Coupon ၊ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်လက်ဆောင်၊ Special Hire Purchase ၊ Insurance Bonus ၊ Service Bonus အဖြစ် ၁ နှစ်တာ လက်ခမဲ့ပြင်ဆင်ခွင့်နဲ့ အခြား Promotion လက်ဆောင်တွေပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ICON Nissan Grand Opening Special Awards ဖြစ်တဲ့ ငွေကျပ်သိန်း တစ်ရာ အထူးကံစမ်းခွင့်ကိုလည်း ဒီဇင်ဘာလအထိ ဝယ်ယူသူတိုင်းကံထူးနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးလည်းရှိနေပါတယ်။
Nissan Icon Auto Showroom ကနေပြီး Brand New ကားသစ်တွေဖြစ်တဲ့ Nissan Sunny (SL)၊ Sunny (SV)၊ All New Nissan Terra ၊ Navara Plus တို့ကိုရောင်းချပေးလျက်ရှိပြီး ယနေ့ Showroom ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနေ့မှာတော့ All New Nissan Terra နဲ့ Navara Plus တို့ကို အကြမ်းစား စိတ်ကြိုက်စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခွင့်တွေပေးထားတာပါ။
Porsche Macan Review (International)
ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှတစ်ဆင့် ဈေးကွက်တွင် ရေပန်းစားလာခဲ့သောကားမော်ဒယ်များ